Olileanya maka ndị ọrụ njem Tanzania na-alụ ọgụ megide COVID-19
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Olileanya maka ndị ọrụ njem Tanzania na-alụ ọgụ megide COVID-19
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • News • Iwughachi • Safety • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Olileanya maka ndị ọrụ njegharị Tanzania
Nkwado nke kọmitii coronavirus nke Onye isi ala ọhụrụ nke Tanzania, Madam Samia Suluhu Hassan guzobere na Eprel, enwetala obi na uche nke ndị na-eme njem nlegharị anya, ọkachasị ndị ọrụ njegharị Tanzania, ndị na-ekwu na nkwenye nke ọgwụ mgbochi afọ ofufo dị mma ma bụrụ ihe mkpali ọhụrụ maka mgbalị siri ike ha na-eme ịtụte ụlọ ọrụ ahụ.
Onye isi oche ndị na-ahụ maka njem njegharị na Tanzania kwuru na ndị mmadụ kwesịrị inwere onwe ha ikpebi ma ha chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi.
Paspọtụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ga-abụ ihe akaebe na e nyela mmadụ ọgwụ mgbochi ọrịa COVID-19, nata nsonaazụ nnwale na-adịghị mma, ma ọ bụ weghachite nje ahụ.
TATO mepụtara nkwado akụrụngwa ahụike na isi ihe nkiri njem, gụnyere ọrụ ụgbọ ala na nkwekọrịta na ụlọ ọgwụ ụfọdụ maka ndị njem nleta.
Kọmitii nke ndị ọkachamara nyere ọrụ iji nyochaa ọnọdụ ọrịa na-efe efe nke COVID-19 ma kwado ụzọ kachasị mma iji zaghachi ya gwara ndị gọọmentị ka ha gbanwee na njikọta nke iwebata ọgwụ mgbochi na mba ahụ, na-arụ ụka na ọgwụ mgbochi ụwa akwadoro dị mma ma dị irè.
"Enwere nnwere onwe maka ndị mmadụ ikpebi ma ha ga-agbakwa ọgwụ mgbochi," Onye isi oche nke otu ahụ, Prof. Said Aboud kwuru, na nnọkọ ogbako na State House na Dar es Salaam na Mọnde.
The Tù Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Njegharị na Tanzania (TATO) Onye isi oche, Willy Chambulo, kwuru na ndụmọdụ ndị kọmitii a na-anọdụ ala nke ọma na ndị ọrụ njegharị, na-arụ ụka na ọ bụrụ na akwadoro ha, ha ga-ahụ ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ ndị njem nlegharị anya, kamakwa imeghe mba ahụ maka itinye ego itinye aka na mba ofesi.
“Tanzania atụghị ihe ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, maka igosipụta nghọta na irube isi na ntuziaka Organizationtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) dị ka ịmata ndị njem nleta ọgwụ mgbochi, nke a maara nke ọma dị ka 'ndị na-ebu akwụkwọ ikike akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ,'" ka onyeisi TATO kwuru.